Author: Akinoll Faedal
Gedgedoonka maankiyo qalbiga, gocasho soo boodka, Xaajada garlayliga jartiyo, Gun u saluugayga Gibladiyo mashxaraddayda iyo, farax la goohayga Gandoodkayga taahayga iyo, goobo xaradhkayga. Ummad geeska loo tumay habeen, gocasho soo jeeddo Haddii aan haddaawi loo golayn, amase gaashaanka Fallaadhiyo gabooyaha haddaan, godobta loo taaban Iyadoo gadoodiya hadday, fadal garmaammayso Hadba nabar gataatiya hadday, gebi dhac tuuryayso Galladdeeda oo dhow hadday, gaadhi kari weydo Inta gudashadeed tahay hadday, geysan kari weydo Iyadoon garaysnayn haddii, gacantu ay daasho.
Inkastoo giyigu waa xormee, gabqy lagu meershe Inkastuu gaggaabkii cuslaa, garangar duul duulay Xaajada god-raaca leh haddii, loo gabbala eego Sida ay u kala geysan tahay, way gun hadrawwi Kol haddaan garaad lagala hadhin, galabba sheeggeeda Inta maanku gaajeysan-yahay, guuli waa weliye.
Gashigayga way dhaqanyihiin, gaasaskii qabaye. Weli gaaf dugsoon bay hurdaan, ganacya weyntiiye Dibjirkii gidaarrada hurdaa, laysu soo guraye Gebegebe rag lagu keenay baa, layga gadayaaye Erey gara haddii loola tago, godol ma waayeene Gargaarkoodu wuu dhimi lahaa, guul-darrada taalle Lafa gerina wayjebin lahayd, maalin gudeheede Gobanimana way dhalin lahayd, loo gudboonyahaye Gacalnimana way hubin lahaydaan la goyn karine.
Weli gumucu meel baydhsan buu, gawda ku hayaaye Gariirkaad maqlaysaan ka dhow, goobahaan rabaye Gadhqaadkeedu waa leexsanyahay, waana gudayaaye Garar loo maleeguu ku ridey, guura socodkiiye Guudkeedu waa wada fin iyo, gaatir iyo booge Hadday gooli-baadh tahay, waxaa gabay raggeediiye Guyaal iyo guyaal bay rarteengocorro shaydaane Hadraaei goblamin baa haddanageelo loo hadhaye Gol-dalooladeedaa ka badan, galalka ciideede.
Gelin looma wada sheegi karo, xaajo geda weyne Gawdiidka iyo quusta waa, lagu gumoobaaye Mar haddaan hillaab lagu gudbayn, giriftan mooyaane Gabgabteedu waa xubin intay, gawrac leedahaye Geeddiga cagaa hadrazwilagu geyoodaaye Gellimaadka hayskaga jirtiyo, goosan habaqlaaye Gubuxsiga mar uun bay tirsiga, meel ka soo geliye Gargaraaciddeediyo ha deyn, geed ka didinteeda Garashadu hadday ruux la tahaysuu u garanaayo Garaadkiisu suu qabo haddii, loola garan waayo Gardarruu u qaataa ninkiiyidhi garaadkiise.
Giiryaalayaashiyo fulaa, hadraxwi guuraanka Gumarta iyo maajeenta iyo, geed-xunkiyo tuugga Gungunnaafka iyo maarta iyo, gocorka aan quudhin Kun ninoo guraangura hadduu, goob isugu keeno Guufkiyo haddii hooda iyo, giniga loo qaybsho Dadka kale intii gudan haddii, gararka loo jiido, Ninka gaaban meel dhow haddii, looga geda-sheegto Guubaabadeedii haddii, loogu godadleeyo.
Hadallada galoofta ah haddii, loogu mala gaaxsho Guryo-noqoshadeedii haddii, lagu gawaan-raacsho Gabbal daye hadrxawi hadday, laba gar-daymooto Shimbiraha gabraartiyo hadday, galow wax weydiiso Kol hadday galaydh soo kallahay, laabta uga guuxdo Garba-raar cadhaysani hadduu, gooyo taladeeda Guulkeedu dheeraa sidii, geenyadii Bixine. Markay raar guraysaba nin bay, gudub tidhaahdaaye Gabno ugubi way quusisaa, gaawe Cumarowe Garab-daar ninkii lagu bokhraa, geedad sare waabye Gar-ma-qaatayaashiyo dadkaa beera, ruux gudhane Ganbo nimaan la soo bixin haddii, guulo lagu waabo Markuu dhaawac geystaba haddii, loo gargarateeyo Isagoo canaan lagu gudbiyo, gaarran filanaaya Giblo iyo haddii sacabbo lulan, loogu gogol-xaadho Keligii inuu guurti yahay, maalintaa gunudye.
Marka uu gadaan iyo gadaan, Gacan-togaaleeyo Ayuun buu waxaan ganac lahayn, sii gorgoriyaaye Seetada nin goostaba, wuxuu gesto lala yaabye, Mar hadduu tallaabada gurguro, gaatan iyo booddo Dhaaxaa gadaal laysla tebey, wiil galbaday jeere. Toojaba waxaa lagu godlaa, say u gaar tahaye Gurranidu mar waa dhalasho iyo, gacanba qaabkeede. Gole miiggan, geed sheegan iyo, garangar muunaysan, Gudban iyo cod laba geesa iyo, guurti kala soorta, Garnaqsiga mudducigoo tashiga, gooni uga showrey.
Gobannimadu waa libin ku taxan, geeddi nololeede. Galab noolba ooddeedu waagudinta loo hay-ye Nin gufeeya mooyiye ma jirin, ruux hdraawi Gelbiskeeda oo qudha hadduu, tacabku kuu gooyo Adigoo gadaashaday haddayguure kugu dhaafto Gommodkiyo yaboohdeedu way, goora badataaye Haddii aan gantada loo adkayn, amase gaafaanta.
Garan maayo maalmaha intuu, soor gad leeyahaye. Hadduu gaws dhurwaa ruugi karo, hadraaawi lafguri taalle. Nin dharaar wuxuun laga guntay, guushu jamataaye Gobannimadu ruux kuma xidhniyo, Giib ninkii dilaye Agaabaynta maalmaha gudbiyo, galaha taariikhda Gadood dhacayba sheekuu lahaa, geyfan iyo raade Ganba-xoorka waayaha haddii, laysu minan guursho Dad uun baa ma guurtada lahaagoobihii baxaye.
Gurgurshaagu awr buu ka yahay, rarasho gaadiide. Inta ruux wax gaadhsiin karaa, way gun dhowdahaye Noloshana galgalaheeda iyo, gebi hadraasi Waxaan geesi karin baa jiroon, gaar ninawfaline, Xaajaba gan baa loo unkaa, talaba waa goore Ummadyahay tiraa kaa gedmanewax isu geygeyso Ninkii aad garaaddiyo shaxshaxo, saartay garabkiisa Kol hadduu dharaar goonya kulul, kaa gelgelin doontay Waxaad galabsatuun baa jiree, gaado kale yeelo.
Guddoonkaaga reeree markay, kula gudboonaato Gamaaddaada muunee haddaad, geeri huri weydo Guntashana xusuusnow waxaad, godolba soo joogtey Gurgurshaana haw raran nimaan, gudasho kuu doorin Garashana ogsoonow inay, xaaja badan goyso geeraarku waa sude hadduu, kuu ged-bixi-waayo Adba goor is weydii intuu, gabaygu kaa dhaafo.
Ged ninkii ogaadaba shillale, guuto loo wacaye. Goonbaartu eelkay dhigtaba, gaari baw xidhane Godobteedu waxay saarantahay, meelo aan geyine God markaan daboolaba far baa, laygu godayaaye Nin gefaaba lay tirinayaa, garasho waa yaabe Waxan ahay nin lagu saan gatoon, raadba soo geline Garraantayda qaar iyo, lag iyo, gaasas baa necebe Gabbashayda duul iyo badh iyo, goosan baan rabine Haddaan gaasho yeeshana dar bay, gawl la leedahaye Hadba waxaan ku guul seegayaa, lama garaystaane.
Ummadyahay dib uma guuri karogooshkan maanta ahe Gosha hooyo waa laga koraa, goodir kay tahaye Gashi baxana waa lagu dayaa, geed ka hadalkiiye Hadday gudubto yeedhaydu waasheeko ii gadane. Nin kastoo ganbadu saarantahay, dunida guudkeeda Gurmadkayga waw baahanyahay, ruux la gaasiraye Taydana ninkii igu guntadey, waw gar leeyahaye Marba gooha dhiillada halkii, igu galoollaata Karaankayga waan geyn intaan, geeri moogahay Waxa ina rag ii guulayaatiisa gaarka ahe.
Garawshiiyo jeeraan ka helo, gaanka dunidayda Jeeraan galaa baxo arlada, gooddi iyo gooddi Jeeraan gufaacada ku tago, meelo geriyaada Gaaliyo Islaamkaba ilaa, taydu wada gaadho Barigiyo Galbeedkaba ilaa, laygu gacan qaado Gurey iyo Islow iyo Hurrow, gabaygu waa beene.
Godadleysan maayee tashiga, waan guddoonsadaye Waxba yaan indhaha laygu gubin, gaabsi ma aqaanne. Gudcur laga tallaabsaday ilays, baadi lagu goobtay, Gamas iishay, gaashaan burburay, gawrac laga maarmay, Dunidoo giblada iidsanoo, gacal walaalowdey Gudboonaanta xeerkeeda iyo, garasho nuurkeed dheh.
This blog is kept spam free by WP-SpamFree. Gashigayga way dhaqanyihiin, gaasaskii qabaye Weli gaaf dugsoon bay hurdaan, ganacya weyntiiye Dibjirkii gidaarrada hurdaa, laysu soo guraye Gebegebe rag lagu keenay baa, layga gadayaaye Erey gara haddii loola tago, godol ma waayeene Gargaarkoodu wuu dhimi lahaa, guul-darrada taalle Lafa gerina wayjebin lahayd, maalin gudeheede Gobanimana way dhalin lahayd, loo gudboonyahaye Gacalnimana way hubin lahaydaan la goyn karine. Garawshiiyo jeeraan ka helo, gaanka dunidayda Jeeraan galaa baxo arlada, gooddi iyo gooddi Jeeraan gagay ku tago, meelo geriyaada Gaaliyo Islaamkaba ilaa, taydu wada gaadho Barigiyo Galbeedkaba ilaa, laygu gacan qaado Gurey iyo Islow iyo Hurrow, gabaygu waa beene Godadleysan maayee tashiga, waan guddoonsadaye Waxba yaan indhaha laygu gubin, gaabsi ma aqaanne.
Haadraawi here to cancel “reply”. Poet, hasraawi and playwright Heego muuqdheer — Hadraawi Somaliland Diva: